Semalt Islamabad Expert: How To Start A WordPress Blog Muzasi Kupfuura 10 Maminitsi
Nyika yatiri kurarama iri kuchinja nokukurumidza, uye inguva yokuti iwe ukure bhizinesi rako neShokoPress website kana blog. Kunyange zvazvo pane nhamba huru yehutano hwehutano hwemashoko, WordPress iri kushandiswa nevanhu vanosvika 95% pamusana pekushandiswa kwayo kwevashandisi uye zvinhu zvakagadziridzwa. Ndiri kushandisa nguva yakazara yekugadzira, uye vanhu vakasiyana-siyana vanoita zvakafanana - top rated windows vps. Iwe haugoni kuita mari paIndaneti pasina bhaji yako pachako, uye haisi chakavanzika icho WordPress ndiyo yakanakisa yemauto ekugadzira blog.
Pano Michael Brown, nyanzvi yepamusoro kubva kune Semalt , achakudzidzisa kuti utange sei BlogPress mumaminitsi mashoma gumi.
Nhanho # 1: Usabvisa pfungwa:
Kana uchida kukudziridza uye kuchengeta bhulogi reShokoPress, unofanirwa kuva nemafungiro ekugadzira uye haufaniri kuva nepfungwa shoma. Ndinofara, nhamba huru yemablogs aripo kuti ave nokufemera kubva. Uye pane mabhuku akasiyana-siyana iwe unogona kunge usingafariri. Ndicho chikonzero iwe unofanirwa kuda hurukuro yaunonyora pamusoro uye haufaniri kutanga kutanga mabhurogi kana iwe usingadi kunyora chimwe chinhu zuva nezuva.
Nhanho # 2: Zita bharogi uye usarudza kubata webhu:
Vanhu vakawanda vanosarudza wordpress.com nekuda kwemabasa ayo akasununguka. Kana iwe uchida kuva neimba yako, iwe unofanira kuzvisarudza kubva GoDaddy, BlueHost kana zvimwe zviitiko zvakafanana. Usambofunga uye wotumidza blog yako pakarepo. Panguva imwe chete, iwe unofanirwa kusarudza webhupu yekuita webhutori chete kana iwe uchiziva nezveshumo. Kazhinji, iyo mazita ane mazita ari dot com iyo mari yaunoshandisa kusvika pa $ 15 pagore, uye kubata mazano kunotarirwa nemupiki wako webasa. Kazhinji, zvirongwa zvekugadzirisa gore negore zvinobva ku $ 40 kusvika ku $ 5000. Pasina web hosting uye domain domain, haugoni kukura blog.
Mamwe mazano anokosha aunofanira kuyeuka ndeaya:
Sarudza zita rinonzi .com domain
Sarudza mazwi maviri kusvika matatu kuitira zita rako rebhulogi
Shandisa izwi guru rekushandisa kusimudzira bhaibheri rako nenzira iri nani
Usasarudza mahwanda web hosting sezvo ichapa zvigaro zvese, maitiro, uye zvingasarudzwa
Danho # 3: Isa WordPress uye Sarudza Musoro:
Chechitatu uye chimwe chezviito zvakakosha zvikuru kuisa WordPress kubva paCPanel. Uye pakupedzisira, unofanirwa kusarudza chinyorwa uye woita kuti chibudiswe pakarepo. Munyika yekubhururuka, WordPress maitiro anozivikanwa semitambo. Kune mazana ezviuru zvemashoko asi avo vanonzwa vanofarira zvikuru uye vakasarudzwa. Kana imwe nyaya yakasarudzwa, iwe unogona kuiparadzanisa chero nguva. Ingova mu WordPress yako dashibhodhi uye shandisa nzvimbo yako yedidomain.com/wp-admin. Apa ndipo paunogona kushandura zvirongwa zveblogi rako uye kushandisa zviyeuchidzo zvako zvakanyatsonaka. Kana iwe usingakwanisi kuwana mharidzo yakakodzera, ndinokukurudzira kuti usarudze Thrive Theme, StudioPress, ElegantTheme kana ThemeForest, iyo ndiyo yakanakisisa yeShokoPress hurukuro.
Nhanho # 4: Tongedza uye kujekesa bhulogi re WordPress
Kana imwe hurukuro yave yakasarudzwa, iwe unofanirwa kuchinja uye kugadzirisa bhaibheri rako reWebsite. Kunyange zvazvo zvinyorwa zviri nheyo dzewebsite yako, kugadzirisa uye kugadzirisa zvakanaka zvakanaka kuvandudza bhurogi rako rekutsvaga mumatsva ekutsvakurudza. Semuenzaniso, unogona kushandisa WordPress plugins kuwedzera mafomu ekubatana, maforamu, sliders, mifananidzo, uye mavhidhiyo kumabhulogi ako. Enda kunzvimbo yakatarisa uye unganise paChikwata. Pano iwe unogona kuwedzera zita rebhulogi yako uye mutambi waro. Saizvozvowo, kutsvaga injini yekugadzirisa inokosha kune WordPress yako blog. SEO ndiyo nzira yekugadzirisa bhaibheri kuti iwanikwe mumitsva yekutsvaga injini. Isai SEO ne Yoast plugin kuti uise zvinotsanangurwa, meta tags, mazita ekuremekedza, uye mazwi anokosha emashoko ako.
Nhanho # 5: Nyora yako yekutanga yepa blog
Inguva yekunyora yekutanga nyanzvi yenyaya uye ichiita kuti iite. Wordpress inoshandisa intuitive editor, iyo yakafanana neshoko rako rekushandura chinhu. Zvinyorwa zvitsva zvinogona kugadzirwa kubva pane WordPress yako admin admin. Iwe unongotanga kuvhara paBhokisi reBotori mubhokisi rezasi roruboshwe, kutevedzwa nekutsvaga paAd Add New button. Wordpress ichakurumidza kuumba permalinks yezvose zvemashoko ako zvichienderana nemashoko ako ekutanga uye musoro wako / musoro.
Pamberi pako iyo Bhatani bhatani, iva nechokwadi chokuti nyaya yako ine zviitiko zvinotevera:
Inotaurirwa mukutaurirana uye kutaura
Zviri mukati hazvina maturo uye hazvina maturo
Wakashandisa zvinyorwa pamashure
Unogonawo kushandisa mapepa, mapepa, uye mabhuku ekuongorora kuti nzvimbo yako ione seyakanaka
Isa mifananidzo yakakodzera nemavhidhiyo
Sezvinyorwa zvekupedzisira, taida kukuudza kuti kana chinyorwa ichibudiswa, unofanira kuzvigovera pa Facebook, Twitter, uye dzimwe nzvimbo dzekuchengetwa kwevanhu kuitira kuti vakwekwe vateresi vakawanda.